Oti kurambwa, oti kurohwa | Kwayedza
Oti kurambwa, oti kurohwa
04 Nov, 2019 - 17:11	 2019-11-04T17:12:32+00:00 2019-11-04T17:10:38+00:00 0 Views
MURUME wekuMazowe anoti ari kuoneswa ndondo nekugara achirohwa nemudzimai wake izvo zvave kuita kuti ashaye chiremerera munharaunda.
Patrick Chimutsa akataura mashoko aya apo akamhan’arira Chiedza Make achiti ari kumushungurudza.
Mutongi Noah Gwatidzo akapa Chimutsa gwaro redziviriro.
“Chiedza aimbova mudzimai wangu asi takarambana. Ndaona ndondo nemudzimai uyu. Anouya kumba kwangu kuPlot 10 achinditukirira nekundityisidzira. Anogara achindirova asi ndiye akandiramba. Akangobuda pamba imba ikabva yatoparara,” anodaro.
Anoenderera mberi achiti, “Mudzimai uyu anogara paPlot 1 asi anochirika dzimba pfumbamwe kuti auye kuzondishungurudza. Handichaonekwa semurume pane vamwe varume kumapuroti edu nenyaya yemaitiro emudzimai uyu. Dai dare randibetsera aregera kuuya kumba kwangu, kundirova nekundityisidzira.”
Make anoti murume wake achiri kumuda.
“Mutongi, hongu handichagare pamba asi Chimutsa murume wangu uye ndichiri kutomuda. Handina kumbobvira ndamutyisidzira iye ndiye anotoda kundipfidzisa.
“Akabuda mumba akaenda nekuti tainge tanetsana nekuti airamba kushandisa makondomu. Atori murume wangu uye ndotomuda handingakwanise kurega kuuya kumba kwedu iko kuriko kune murume wangu,” anodaro.